Starting Sustainable SMEs — Balance Professional Services
Home Services Articles Contact & Appointment
Nurturing Success Together
Starting Sustainable SMEs
ရေရှည်တည်တံ့သော လုပ်ငန်းသေးများ စတင်ရာဝယ်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း ပွင့်လင်းလာပြီးတဲ့နောက် အသေးစားနဲ့ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာ လက်တွေ့ပါ။ အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရော၊ ဖြေလျှော့မှုတွေရော ပေးလာတဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်းဖြစ် Brand/ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေ ယခင်ထက်ပိုမို ပေါများလာပြီး စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုလည်း အားကောင်းလာပါတယ်။ စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုအားကောင်းလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ငန်းသေးသမားတွေဟာ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို ပြိုင်ဘက်တွေထဲကနေ ခွဲထွက်နိုင်ဖို့ တီထွင်ကြံဆလာကြပါတယ်။ ဥပမာ- ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Packaging ထုတ်ပိုးမှုပုံသဏ္ဌာန်အသစ်တွေ၊ ဆန်းပြားတဲ့ ကြော်ငြာတင်ပြပုံတွေ၊ အနံ့အရသာအသစ်တွေ စသဖြင့်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဆီက လုပ်ငန်းသေးအများစုဟာ (နိုင်ငံတကာမှာ ဖြစ်နေကြလိုပဲ) နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ (၁ နှစ် - ၃ နှစ် အတွင်း) ပြိုလဲ သွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုလုပ်ငန်း ပြိုလဲမှုတွေဖက်ကို ဦးတည်မသွားစေဖို့ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ထုတ်နုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆောင်ပါးမှာ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာထက် ဘာတွေစဥ်းစားသင့်တယ်ဆိုတာကို အဓိကပြောထားပေးပါတယ်။
၁) လုပ်ငန်းအတွက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ နစ်မြှုပ်နိုင်ပြီလား
မိမိဟာ ယခင်က ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာမှမလုပ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ပြီဆိုတာနဲ့ ပထမဦးဆုံးစဥ်းစားရမှာက ကိုယ်ဟာ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီလားဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ဝန်ထမ်းဘဝက အလုပ်ချိန်ဆိုတာ ၂၄ နာရီမှာ ၈ နာရီပါပဲ၊ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ၂၄ နာရီလုံးနစ်မြှုပ်လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံနိုင်သလားဆိုတာပါ။
၂) Business Plan
ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာ ၆ လ အောက်သာရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ကျရှုံးနိုင်ချေ ၈၀% နှုန်းရှိတယ်လို့ Harvard University က လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာ တစ်နှစ်အနည်းဆုံးရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကတော့ အောင်မြင်ဖို့နိုင်ချေ ၈၀% ရှိတယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။ လုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာ သူတို့ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်ကြပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ နေ့စဥ်လည်ပတ်မှုအပိုင်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာ အားနည်းတတ်ကြပါတယ်။ Business Plan ကောင်းတစ်ခုဟာ သင့်လုပ်ငန်းကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်က မကျအောင်ထိန်းညိှပေးနိုင်ရုံသာမက သင်မမြင်တဲ့ သင့်အားနည်းချက်တွေကို သတိပြုမိအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ Business Plan သေချာချထားခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်ငန်းအတွက် ဘဏ်ချေးငွေယူရမယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေခေါ်ရမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အချို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ Business Plan ဆိုတာ တစ်ခါဆွဲပြီးရင် ပြီးပြီလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ Business Plan ဆိုတာမျိုးက လုပ်ငန်းမစခင် တစ်ကြိမ်တည်း ဆွဲရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲ အချိန်ကာလတစ်ခုကြာတိုင်း (၆ လ၊ တစ်နှစ်) ပုံမှန် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး ဖြည့်စွက်သင့်တာ ဖြည့်စွက်၊ ပြင်သင့်တာ ပြင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဟာ လုပ်ငန်းက နှစ်အတော်ကြာ လည်ပတ်ပြီး ဖြစ်နေရင်တောင် Business Plan ဆွဲဖို့က လိုနေဦးမှာပါပဲ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အခက်အခဲဆုံး အချိန်ကာလတွေဟာ လုပ်ငန်းစတင်ပြီး (၂) နှစ်အတွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် စတင်ပြီး (၂) နှစ်ဟာ ငွေအရင်းအနီှးအလိုအပ်ဆုံးအချိန်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပထမနှစ်မှာတင် ကျရှုံးသွားကြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိူး (ငွေအရင်းအနှီး၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားမရှိခြင်း၊ စျေးကွက်မရခြင်း၊ Demand တွက်ချက်ပုံမှားယွင်းခြင်း စသည်တို့) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်၊ ဒုတိယနှစ်မှာ ကျရှုံးရတဲ့ စီးားရေးလုပ်ငန်းအများစုကတော့ ငွေကြေးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းဟာ သူ့ငွေနဲ့သူ မလည်ပတ်ခင် ငွေအရင်းအနှီးပြတ်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ လုပ်ငန်းကနေ ဝင်ငွေအဖြစ်ရရှိတဲ့ သူ့ငွေနဲ့သူ အမှန်တကယ်လည်ပတ်ဖို့ဆိုတာ အနည်းဆုံး ၃ လ ကနေ ၆ လ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ ရင်းနှီးငွေထပ်မံ စိုက်ထုတ်စရာမလိုတော့ပဲ အရင်းကြေပြီး အမြတ်ရရှိဖို့ဆိုရင် ၂ နှစ် - ၃ နှစ်ကြာသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနည်းဆုံး ၄ - ၅ နှစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မှ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စစေချင်ပါတယ်။ ဒီိလိုစိတ်ရှိမှသာ ကနဦးပိုင်းမှာ ကြုံရမယ့် ခက်ခက်ခဲခဲ အချိန်တွေမှာ Focus ရှိရှိကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။
ဘယ်အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းမဆို Accounting/ စာရင်းဇယားကို ပေါ့သေးသေးမလုပ်ကြပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ ငွေတွေ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုဝင်နေပြီး ဘယ်ကနေဘယ်လိုထွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ Cashflow ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းကိုင်တွယ်ထားနိုင်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ Accounting System နဲ့ စာရင်းဇယား သေချာမှတ်သားခြင်းဟာ နေ့စဥ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့်ဆင့်ကနေသတိမထားမိလိုက်ရာကနေ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုအကြီးစားတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် (ဥပမာ။ ။ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေ၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တွက်ချက်မှုအမှားတွေ၊ နေ့စဥ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေနှုန်းထားတွေကြောင့် အရှုံး အမြတ်တွေ စသည်)။ ဒါကြောင့်မို့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ စာရင်းကိုင်ရဲ့ ကဏ္ဍက အရေးကြီးပါတယ်။ စနစ်ကျတဲ့ Accounting System တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ဟာ လစဥ် စာရင်းချုပ်တွေကနေ တွေ့ရှိတဲ့ သတိပြုသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို တင်ပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၅) လုပ်ငန်းအများစုကျရှုံးရခြင်းရဲ့ အဓိကအကျဆုံးအချက်
အဲဒီအချက်ကတော့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ညံ့ဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ ဘာတွေပါသလဲ။
လူရွေးမှားခြင်း။ ။ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဟာ အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး ရာထူးတာဝန်/ Position နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဝန်ထမ်းမျိုး ခန့်ရမယ့်အစား မိမိနဲ့ပနံသင့်တဲ့သူ၊ မိမိစိတ်ထဲက ကောင်းမယ်ထင်တဲ့သူကို ခန့်အပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
လေ့ကျင့်မှု Training အားနည်းခြင်း။ ။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ပါစေ လေ့ကျင့်မှု Training ကောင်းကောင်းမရှိရင် အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို မပြနိုင်ပါဘူး။ နေရာတကာကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်ခြင်း။ ။ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဟာ လုပ်ငန်း အဆင်ပြေလာလို့ ဝန်ထမ်းတွေ ထပ်မံခန့်ထားပြီဆိုတာနဲ့ မိမိလုပ်နေတဲ့ထဲက ဝာာဝန်ဝတ္တရား/ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ခွဲဝေပေးရပါမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ နေရာတကာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်နေရင်တော့ နေှာင့်နှေးကြန့်ကြာတာတွေ၊ အရည်အသွေးပိုင်း အားနည်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းခြင်း။ ။ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့နောက်မှာ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်/ မန်နေဂျာတစ်ယောက်အမြဲရှိပါတယ်။ အချိန်ကို သေချာစီမံတတ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အဖို့ များပြားလှတဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာတွေကို အချိန်ပေးဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သူဌေးက လုပ်ငန်းမှာ အမြဲမရှိခြင်း။ ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အလုပ်ခွင်မှာ မရှိပဲနဲ့တော့ စီးပွားရေးတစ်ခုကို ဘယ်လိုမှ Run လို့မရပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်ဟာ ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ နေ့စဥ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို သိမြင်နေရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာအချို့က မန်နေဂျာတစ်ယောက်လောက်ခန့်ပြီး ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ မန်နေဂျာဆိုတာ ပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မချနိုင်သလို လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း လုပ်ငန်းမှာ အမြဲမရှိတဲ့အတွက် အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ သတင်းအချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်တော့ Marketing ေပါ့ဗျာ။ ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတာကို သိရမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Business Plan ဆွဲပြီဆိုကတည်းက Business Plan ရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံက ကိုယ့်ရဲ့ Marketing Plan အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရေးဆွဲထားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်။ သင့်ရဲ့ Marketing Plan က သင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အခရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Marketing Plan က သင့်ရဲ့ အဓိက ဖောက်သည်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ သူတို့လိုချင်နေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုက ဘယ်လိုလဲဆိုတာ သိအောင် အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
၇) Customer Service
ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလတ်စား/အသေးစားလုပ်ငန်းတွေ ပေါများလာတဲ့ အခါ Customer/ဖောက်သည်/စျေးဝယ် တွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတွေ များပြားလာပြီး Customer က ပိုမို Power ရှိလာပါတယ်။ အဲ့လို ရွေးချယ်စရာတွေ များပြားလှတဲ့ အထဲမှာမှ Customer က ပြိုင်ဘက်ထက် ကိုယ့်ကို တစိုက်မတ်မတ် ရွေးချယ်အောင်က ကုိယ့်မှာ သူများထက်သာလွန်တဲ့ Customer Service ရှိနေအောင် ကြိုးစားပါ။
၈) လမ်းပျောက်ချိန် လမ်းမေးရမှာ မကြောက်ပါနဲ့
စီးပွားရေးလုပ်ရတာ တခါတလေကျ ကပ်ဆိုးဝင်သလိုပါပဲ။ ကိုယ်က ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်ထားဦး ကိုယ့်နိုင်ငံ စျေးကွက်က အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာရယ်၊ အခြား ကိုယ့်ချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေရယ် (အစိုးရပေါ်လစီ အပြောင်းအလဲ စသဖြင့်) ကြောင့် ကိုယ့်စီးပွားရေးဟာ ကျဥ်းထဲ ကြပ်ထဲအချိန်မရွေးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင် ကိုယ့်ထက်သိတဲ့ တတ်တဲ့သူ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေဆီကို ချဥ်းကပ်ဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ Professional အတိုင်ပင်ခံတွေ၊ ယခင် ဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးသူတွေ (ပိုင်ရှင်ရော/အလုပ်သမားရော) ကိုမေးမြန်းပါ။ အများစုက သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်၊ သင့်ဘက်ကသာ ပြောဖို့တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
ကဲ.. ဒါကတော့ လုပ်ငန်းသေးများ ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါ။ အသေးစားနဲ့ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေ။
ထက်ခိုင် (Business Development)
SMEHtet Khaing Hla Soe October 4, 2018 Accounting, SME, Substainable
Why if you don't do accounting?
AccountingHtet Khaing Hla Soe October 4, 2018 Accounting
How to SaveaFailing Business?
Business FailureHtet Khaing Hla Soe October 2, 2018 Accounting, Business Failure, Business Survival
We are active on facebook too. Please like our page for the daily dose of business knowledge.
နေ့စဥ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ နှင့် ဗဟုသုတများကို ဖတ်ရှုရန် ကျွန်တော်တို့၏ Facebook Page ကို Like လုပ်ထားပါ
You can contact us through our web-forms or our numbers or even our facebook messenger.
ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုပါလျှင် Website Form, ဖုန်း နှင့် Facebook Messenger များမှ တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ဤ Website ကို Kai Creatives မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်သည်။
Balance Professional Services
Salone - 4/84, 66th Street, Chan Mya Thar Zi Township,